2 Ụbọchị Devid ga-anwụ wee ruo nso;+ o wee nye Sọlọmọn nwa ya iwu, sị:
2 “Ọ bụ ọnwụ na-echezi m ihu,+ ma gị onwe gị,+ dị ike, meekwa ka dimkpa.+
3 Rubere Jehova bụ́ Chineke gị isi site n’ije ije n’ụzọ ya,+ site n’idebe ụkpụrụ ya, ihe o nyere n’iwu na ihe o kpere n’ikpe+ na ihe àmà ya, dị ka ihe e dere n’iwu Mozis si dị,+ ka i wee jiri akọ na-eme ihe niile ị na-eme, jirikwa akọ na-eme ihe n’ebe ọ bụla i chere ihu;
4 ka Jehova wee mezuo okwu ya nke o kwuru banyere m,+ sị, ‘Ọ bụrụ na ụmụ gị+ elezie ụzọ ha anya site n’iji obi ha dum+ na mkpụrụ obi ha dum na-eje ije+ n’ihu m n’eziokwu,+ ọ dịghị nwoke gị ọ bụla a ga-ebipụ ka ọ ghara ịnọkwasị n’ocheeze Izrel.’+
5 “Gị onwe gị makwaara nke ọma ihe Joab nwa Zeruya mere m+ n’ihe banyere ihe o mere ndị isi abụọ nke ndị agha Izrel, bụ́ Abna+ nwa Nee na Amesa+ nwa Jita,+ mgbe o gburu ha wee kwafuo ọbara+ agha n’oge udo ma tee ọbara agha n’ájị̀ ya nke o kere gburugburu úkwù ya nakwa n’akpụkpọ ụkwụ ya nke o yi n’ụkwụ.
6 Ị ga-ejikwa amamihe gị mee ihe,+ ma ghara ikwe ka isi awọ́ ya gbadaruo Shiol+ n’udo.+
7 “Ị ga-egosikwa ụmụ Bazilaị+ onye Gilied obiọma,* ha ga-esokwa ná ndị na-eri ihe na tebụl gị;+ n’ihi na otú ahụ ka ha bịara m nso+ mgbe m gbapụrụ n’ihu Absalọm nwanne gị.+
8 “Lee, Shimiaị+ nwa Gira, onye ebo Benjamin nke si Bahurim,+ so gị nọrọ, ọ bụkwa ya kpọrọ m iyi ma kọchaa+ m n’ụzọ na-akpasu iwe n’ụbọchị m na-aga Mahaneyim;+ ọ bụkwa ya gbadatara izute m na Jọdan,+ m wee jiri Jehova ṅụọrọ ya iyi, sị, ‘M gaghị eji mma agha gbuo gị.’+
9 Ma ahapụla inye ya ntaramahụhụ,+ n’ihi na ị bụ nwoke maara ihe,+ ị makwaara nke ọma ihe i kwesịrị ime ya, mee ka isi awọ́+ ya buru ọbara gbadaa Shiol.”+
10 Devid wee soro nna nna ya hà dinaa,+ e wee lie ya n’Obodo Devid.+
11 Ụbọchị Devid chịrị Izrel dị afọ iri anọ.+ Ọ chịrị afọ asaa+ na Hibrọn,+ chịakwa afọ iri atọ na atọ na Jeruselem.+
12 Ma Sọlọmọn nọkwasịrị n’ocheeze Devid bụ́ nna ya;+ ọbụbụeze ya wee guzosie ike nke ukwuu.+
13 Ka oge na-aga, Adọnaịja nwa Hagit bịakwutere Bat-shiba,+ nne Sọlọmọn. O wee sị ya: “Nke a ị bịara, udo ọ̀ dịkwa?”+ O wee zaa, sị: “Udo dị.”
14 Adọnaịja wee sị: “Ọ dị ihe m chọrọ ịgwa gị.” O wee sị: “Kwuwe.”+
15 O wee gaa n’ihu ịsị: “Gị onwe gị maara na ọchịchị gaara abụ nke m, ọ bụkwa m ka Izrel dum lekwasịrị anya ka m bụrụ eze;+ ma ọchịchị tụgharịrị wee ghọọ nke nwanne m nwoke, n’ihi na ọ bụ Jehova mere ka ọ ghọọ nke ya.+
16 Ugbu a kwa, e nwere otu ihe m na-arịọ gị. Ajụla arịrịọ m.”+ O wee sị ya: “Kwuwe.”
17 O wee sị ya: “Biko, gwa Sọlọmọn bụ́ eze (n’ihi na ọ gaghị ajụ arịrịọ gị) ka ọ kpọnye m Abishag+ nwaanyị Shunem+ ka ọ bụrụ nwunye m.”
18 Bat-shiba wee sị: “Ọ dị mma! Aga m agwara gị eze okwu.”
19 Ya mere, Bat-shiba gakwuuru Eze Sọlọmọn ịgwa ya okwu n’aha Adọnaịja.+ Eze biliri+ ozugbo izute ya wee kpọọrọ ya isiala.+ O wee nọdụ n’ocheeze ya, meekwa ka e debere nne eze ocheeze, ka o wee nọdụ n’aka nri ya.+
20 Bat-shiba wee sị: “Ọ dị otu ntakịrị ihe m chọrọ ịrịọ gị. Ajụla arịrịọ m.” Eze wee sị ya: “Nne m rịọwa; n’ihi na agaghị m ajụ arịrịọ gị.”
21 O wee gaa n’ihu ịsị: “Ka a kpọrọ Abishag nwaanyị Shunem kpọnye Adọnaịja nwanne gị nwoke ka ọ bụrụ nwunye ya.”
22 Eze Sọlọmọn wee zaa nne ya, sị: “Gịnị medịrị i ji arịọ ka a kpọnye Adọnaịja Abishag nwaanyị Shunem? Rịọkwuonụ ka e nye ya ọchịchị+ a (maka na ọ bụ nwanne m nke tọrọ m),+ ọbụna ya onwe ya, nyekwa ya Abayata+ onye nchụàjà nakwa Joab+ nwa Zeruya.”+
23 Eze Sọlọmọn wee jiri Jehova ṅụọ iyi, sị: “Ka Chineke mee m otú a, ka ọ tụkwasịkwa ihe na ya,+ ma ọ bụrụ na ọ bụghị imegide mkpụrụ obi nke ya ka Adọnaịja kwuru ihe a.+
24 Ma dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ bụ́ onye mere ka m guzosie ike,+ meekwa ka m nọkwasị n’ocheeze Devid nna m+ nakwa onye wuuru m ụlọ+ dị nnọọ ka o kwuru,+ taa a ga-egbu Adọnaịja.”+
25 Eze Sọlọmọn ziri Benaya+ nwa Jehoyada ozi ozugbo; o wee wakpo ya, o wee nwụọ.+
26 Eze wee gwa Abayata+ onye nchụàjà, sị: “Laa n’ala gị dị n’Anatọt!+ N’ihi na i kwesịrị ọnwụ;+ ma agaghị m egbu gị taa, n’ihi na i buru igbe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova+ n’ihu Devid nna m,+ nakwa n’ihi na ị nọrọ ná mmekpa ahụ́ n’oge niile nna m nọ ná mmekpa ahụ́.”+
27 Ya mere, Sọlọmọn chụpụrụ Abayata ka ọ ghara ịbụkwa onye nchụàjà Jehova, iji mezuo okwu Jehova nke o kwuru na Shaịlo+ megide ụlọ Ilaị.+
28 Akụkọ ahụ wee ruo Joab ntị+—n’ihi na Joab chọburu iso Adọnaịja,+ ọ bụ ezie na ọ bụghị Absalọm ka ọ chọrọ iso+—Joab wee gbaga n’ụlọikwuu+ Jehova wee jidesie mpi ebe ịchụàjà aka ike.+
29 E wee gwa Eze Sọlọmọn, sị: “Joab agbagawo n’ụlọikwuu Jehova, ọ nọkwa n’ebe ahụ n’akụkụ ebe ịchụàjà.” Ya mere, Sọlọmọn zigara Benaya nwa Jehoyada, sị: “Gaa wakpo ya!”+
30 N’ihi ya, Benaya bịara n’ụlọikwuu Jehova wee sị ya: “Nke a bụ ihe eze sịrị: ‘Pụta!’” Ma ọ sịrị: “Ee e! N’ihi na n’ebe a+ ka m ga-anwụ.” Benaya wee gaa kọọrọ eze, sị: “Nke a bụ ihe Joab kwuru, nke a bụkwa ihe ọ zara m.”
31 Eze wee zaa ya, sị: “Mee nnọọ dị ka o kwuru, wakpo ya; ị ga-elikwa ya wee mee ka ikpe ọbara+ Joab wụfuru n’ụzọ na-ekwesịghị ekwesị+ ghara ịma mụ na ụlọ nna m.
32 Jehova ga-emekwa ka ọbara ya dịrị n’isi ya,+ n’ihi na ọ wakporo ndị ikom abụọ bụ́ ndị ezi omume karịa ya, ndị kakwa ya mma,+ o wee were mma agha gbuo ha, mgbe nna m Devid na-amaghị banyere ya,+ ya bụ, Abna+ nwa Nee, onyeisi ndị agha Izrel+ na Amesa+ nwa Jita, onyeisi ndị agha Juda.+
33 Ọbara ha ga-adị n’isi Joab nakwa n’isi ụmụ ya ruo mgbe ebighị ebi;+ ma Devid+ na ụmụ ya na ụlọ ya na ocheeze ya ga-enwe udo ruo mgbe ebighị ebi site n’aka Jehova.”+
34 Benaya nwa Jehoyada wee gbagoo+ wakpo ya ma gbuo ya;+ e wee lie ya n’ụlọ ya nke dị n’ala ịkpa.
35 Eze wee mee Benaya+ nwa Jehoyada onyeisi ndị agha n’ọnọdụ ya;+ eze mekwara Zedọk onye nchụàjà n’ọnọdụ Abayata.+
36 N’ikpeazụ, eze ziri ozi wee kpọọ Shimiaị+ ma sị ya: “Wuoro onwe gị ụlọ na Jeruselem, birikwa n’ebe ahụ, esikwala n’ebe ahụ pụọ gaa ebe ọ bụla.
37 Ọ ga-erukwa na n’ụbọchị ị ga-apụ, i wee gafee ndagwurugwu Kidrọn,+ ya doo gị anya na ị ghaghị ịnwụ.+ Ọbara gị ga-adị gị n’isi.”+
38 Shimiaị wee sị eze: “Ihe a i kwuru dị mma. Dị nnọọ ka onyenwe m bụ́ eze kwuru, otú ahụ ka ohu gị ga-eme.” Shimiaị wee biri na Jeruselem ruo ọtụtụ ụbọchị.
39 O wee ruo na mgbe afọ atọ gwụchara, ndị ohu+ abụọ Shimiaị gbara ọsọ gbakwuru Ekish+ nwa Meaka bụ́ eze Gat;+ ndị mmadụ wee bịa kọọrọ Shimiaị, sị: “Lee! Ndị ohu gị nọ na Gat.”
40 Ozugbo ahụ, Shimiaị biliri wee dokwasị ihe o ji anọkwasị n’ịnyịnya ibu ya ma jee Gat, jekwuru Ekish ịchọ ndị ohu ya; e mesịa Shimiaị gara Gat kpọta ndị ohu ya.
41 E wee kọọrọ Sọlọmọn, sị: “Shimiaị esiwo na Jeruselem pụọ gaa Gat, ọ lọtawokwa.”
42 Mgbe ahụ, eze ziri ozi wee kpọọ+ Shimiaị ma sị ya: “Ọ̀ bụ na emeghị m ka i jiri Jehova ṅụọ iyi ka m wee dọọ gị aka ná ntị,+ sị, ‘N’ụbọchị ị ga-apụ apụ nakwa mgbe ọ bụla ị gara ebe ọ bụla, ya doo gị anya na ị ghaghị ịnwụ,’ ọ̀ bụkwa na ị sịghị m, ‘Okwu m nụworo dị m mma’?+
43 Gịnịzi mere i ji ghara idebe iyi i ji Jehova ṅụọ+ na ihe m nyesiri gị n’iwu ike?”+
44 Eze wee gaa n’ihu ịgwa Shimiaị, sị: “Gị onwe gị maara ihe ọjọọ dum nke obi gị maara nke ọma na i mere Devid nna m;+ Jehova ga-emekwa ka i jiri isi gị buru ihe ọjọọ ahụ i mere.+
45 Ma Eze Sọlọmọn ga-abụ onye a gọziri agọzi,+ a ga-emekwa ka ocheeze Devid guzosie ike n’ihu Jehova ruo mgbe ebighị ebi.”+
46 Eze wee nye Benaya nwa Jehoyada iwu, o wee gaa wakpo ya, o wee nwụọ.+
E wee mee ka alaeze ahụ guzosie ike n’aka Sọlọmọn.+
^ 1Ez 2:7*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D11%26Chapter%3D2%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl